Yaa xilka ku wareejinaya Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble? (Aragti Sharci) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dhawaan magacaabistii Ra’iisul-wasaare Roobe kadib waxaa soo baxday su’aal ah cidda xilka ku wareejinaysa Ra’iisul-wasaaraha cusub, ma ra’iisul wasaarihii xukuumadii kalsoonida lagala noqday mudane Xasan Cali Kheere mase kusimihii uu madaxwaynaha magcaabay mudane Mahdi Guuleed?
Hadaba, si su’aashan aan uga jawaabno si sharci ah waxaa lama huraan ah in aan su’aal kale is waydiino oo ah haddii xukuumadda kalsoonida uu baarlamaanku kala noqdo inta Ra’iisul-wasaare cusub laga soo magacaabaayo ma Ra’iisul-wasaarihii ee xilka lagala noqday ayaa sii shaqaynaaya mise waxaa sharci ahaan banaan in xubin ka mid ah xukumadiisi kusima ahaan loo sii magacaabo inta Ra’iisul-wasaare cusub laga soo magacaabaayo?
Ugu horreyn in la magacaabo kusime ka tirsan xukuumaddii baarlamaanku kalsoonida kala laabtay waxay ahayd arrin baalmarsan sharciga gaar ahaan Dastuurka Federaalka KMG qod. 97aad farqadiisa 4aad oo caddayneeso in dhammaan xubnaha golaha wasiiradu ay isla wada dhacaayaan hadii Ra’iisul-wasaarahu istiqaalo keeno ama xilka qaadis lagu sameeyo, sidoo kale qod.103aad ee Dastuurka KMG ah wuxuu jiddaynayaa in dhammaan xubnaha xukuumada ay noqonayaan xil gaarsiiyayaal sii wadaaya hawl maalmeedka xafiisyada.
Sidaas awgeed waxaa sharci ahaan lama huraan ah in Ra’iisul-wasaarihii hore Xasan Cali Kheere uu xilka ku wareejiyo Ra’iisul-wasaaraha cusub mudane Maxamed Xuseen Rooble sababaha soo socdo awgood:-
1. Sida Dastuurku tilmaamaayo gaar ahaan qod.103aad waxay ahayd in Ra’iisul-wasaare Kheere uu shaqada sii wado ilaa laga soo magacaabaayo Ra’iisul-wasaare cusub.
2. In sigaar loo magacaabo kusime ka mid ah xukuumadii kalsoonida lagala noqday waxay ahayd arrin baalmarsan dastuurka gaar ahaan qodobadii aan hore usoo tilmaanay.
3. Ma jirto cid iyo goob uu ku wareejiyay Xasan Cali Kheere xilkii Ra’iisul-wasaaranimada ee horay uu uhaayay, xitaa kusimihii uu madaxwaynuhu magacaabay ee dastuurka baalmarsanaa kuma wareejin wax xil ah.
Asbaabahan awgood waa in ra’iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Kheere uu xilkii uu umadda u haayay goob fagaar ah kula wareejiyaa Ra’iisul-wasaaraha cusub.
W/Q: Qareen: Daahir Maxamed Cali
Banaadir January 17, 2022
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay saqdii dhexe Isbitaalka Digfeer ku booqday Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimuu oo ku dhaawacmay...
Doorashada January 17, 2022
Guddiga Doorashooyinka Jubaland ayaa shaaciyay liiska 13 kursi oo Doorashadooda ka dhaceyso magaalada Kismaayo. Qoraal uu soo saaray Guddiga SEIT ee Jubbaland Guddiga ayaa lagu...
Doorashada January 16, 2022
Ra'iisal wasaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu eedeeyay inuu boobay kursi ka mida kuraasta Golaha Shacabka ee kasoo jeeda Somaliland. Kursigan oo tirsigiisu...
Banaadir January 16, 2022
Odayaasha dhaqanka beelaha Muqdiso ayaa waqti u qabtay bannaanbax lagu waday inuu Muqdisho k adhaco oo loga horjeeday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed...
EXCLUSIVE Banaadir January 16, 2022
Weerar is-miidaamin qorsheysan ah ayaa maanta lagu beegsaday afhayeenka xukuuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu. Qof iskusoo xiray waxyaabaha qarxa ayaa fuliyey weerarka, wuxuuna qofkaasi...
Alshabaab ayaa shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo ninkii isku Qarxiyey Kolonyo socotay Waddada Afisyone ee 21-ka Oktoobar Arbacadii 12 Janaayo 2022. Sida ay...
Puntland oo ku dhawaaqday Doorashada xildhibaanadii ugu horeeyay ee Golaha Shacabka
Guddiga Doorashada Puntland ayaa soo saaray liiska 10 kursi oo ka mida xildhibaannada Barlamaanka Federaalka oo lagu dooranayo magaalada Garowe. Shan kursi ayaa doorashadooda la...
EXCLUSIVE Xog cusub January 13, 2022
Qaar ka mida Wasiirada Xukuumadda xilgaarsiinta ah ayaa xilligan kala guurka qaaday tallaabooyin isugu jira musuq iyo ku takri fal awoodeed, waxaana wasiiradaasi ka...
Xaqiijin: Farmaajo oo iidheh ka dhigtay Tahriibayaal laga soo celiyey Liibiya (3 dhinac oo iska kaashaday)
EXCLUSIVE Bulshada January 13, 2022
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa iidheh iyo olole doorasho uga dhigtay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo soo celinta 97 dhalinyarro Soomaaliyeed oo ku xirnaa...
EXCLUSIVE Ganacsiga January 10, 2022
Xukuumadda Xilgaarsiinta Federaalka Soomaaliya ayaa heshiis cusub la gashay shirkad lagu magacaabo Maru Port Services Ltd oo qaabilsan tayo-dhowrka. Shirkaddan oo sheegtay inay xiriir...